Nhau - Wedzera kuwongorora kuwanda kwevanopinda kunze chando cheni zvine hukama vashandi
Musi waZvita 9, Zhejiang akabata iyo 58th nyowani korona pneumonia denda rekudzivirira uye kudzora basa revatori venhau. Vakakodzera vanhu vaitarisira Provincial Leading Group Hofisi yeDziviriro uye Kudzora uye Provincial Market Supervision Bureau yakaunza mamiriro ekubatanidza nekusimudzira denda rekudzivirira uye kutonga uye hupfumi pamwe nekusimudzira magariro.
Mutori wenhau akadzidza kubva kumusangano wevatori venhau kuti, kuitira kuti zvinyatso kudzivirira njodzi dzakavanzika dze "kutapurirana kwemuviri kubva kumunhu kuenda kumunhu", Zhejiang anoongorora kuongorora, kurodha uye kuburitsa, kutakura, kuchengetedza, kugadzirisa, uye kutengesa kwekunze kunotonhora chikafu checheni. , zvimwe zvinhu zvinounzwa kunze kwenyika, mukwende wevatakuri inbound nezvimwe zvinhu. Sevashandi vakakosha mukudzivirira uye kudzora denda, vashandi mukukanda nekuburitsa uye zvimwe zvinongedzo zvinonyatso kuita zvinodiwa nedziviriro, vanoramba vachiita zvezuva nezuva zvehutano kuongorora, uye kuwedzera kuwanda kweiyo nucleic acid kuyedza. Panguva imwecheteyo, simbisa iyo nucleic acid kuyedza yezvinyorwa zvekupinda nevashandi vanobatanidzwa.Huwandu hwevashandi vemuenzaniso, masampuli ezvinyorwa, uye masampuli ezvakatipoteredza akaedzwa mudunhu rega rega (guta, dunhu) vhiki yega yega haafanire kunge ari pasi pe makumi matatu.
Musangano wevatori venhau wakazivisa kubata kwakakodzera kwechazvino nucleic acid-inovhenekesa inotonhora cheni chikafu:
Na21: 00 manheru emusi waDecember 2, mazuva ese anotarisisa masampula echando emaketeni echikafu anounganidzwa neYuhuan Center for Disease Control uye Kudzivirira paChengguan Central Vegetable Market yakawana chando chenguruve chemberi gumbo chiratidziro chakatengwa kubva kuBrazil chakayedza kunaka nyowani coronavirus nucleic acid. Mushure mekuteverwa neiyo "Zhejiang Cold Chain" system, zvigadzirwa zvakabatanidzwa zvakapinda munyika kuburikidza neShanghai Yangshan Port munaGunyana 28. Nzvimbo yemuno yakakurumidza kutora matanho echimbichimbi akadai sekuchengetedza zvinhu, kuongorora kwevashandi nekuzviparadzanisa, uye kubvisa nzvimbo, uye kuitiswa. nucleic acid bvunzo pane zvakatipoteredza uye vashandi kunze kwemusika husiku. Matunhu akakodzera uye matunhu eTaizhou Guta rakabatanidzwa mukutenderera kwechigadzirwa ipapo rakatakura nhumbi uye kuteedzera kwevashandi, kuferefeta nekurasa. Kudzivirira uye Kudzora Hofisi yakazivisawo matunhu akavakidzana nemaguta. Maererano nenhamba, Taizhou Guta rakaunganidza huwandu hwese zana nemakumi mana nematanhatu esampuli yemubatch yakafanana yezvigadzirwa, kurongedza kwekunze, uye nharaunda yekunze yakabatanidzwa, uye vanhu mazana matatu nemakumi mana nevatanhatu vakabatanidzwa. Iyo nucleic acid bvunzo mhedzisiro zvese zvaive zvisina kunaka.
Musi waZvita 5, Wuxi City, Jiangsu Province, yakazivisa kambani kuti kurongedzwa kwekunze kwemahombekombe echando asina nyama asina nyama akachengetwa nekambani akayedza hutachiona hweiyo coronavirus nyowani. Zhejiang akabva aronga Hangzhou, Ningbo, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Zhoushan, Taizhou nedzimwe nzvimbo nomwe dzakabatanidzwa mune imwechete batch yezvigadzirwa kuti zviitwe nekukurumidza nekuyedzwa, kuongorora kwehutano hwevashandi uye kutapudza utachiona, uye ndokusimbisa zvigadzirwa zvekurasa zvisina njodzi.Kubva munaZvita 8, 4,975 masampuli ezvigadzirwa zvinoenderana uye zvakaputirwa, nharaunda yekunze uye varapi vakapihwa sampuli uye kuyedzwa, uye mhedzisiro yeiconic nucleic mhedzisiro zvese hazvina kunaka.
Kuti uvandudze yakavharwa-chiuno manejimendi manejimendi yekunze kutonhora-cheni chikafu, Zhejiang yaita "yakazara-chikamu oparesheni" pane inotengeswa inotonhora-cheni chikafu chinopinda kuburikidza neZhejiang chiteshi kana kuyerera kupinda Zhejiang kuburikidza neZhejiang zviteshi zvekuchengetedza, kugadzirisa (subcontracting), uye kutengesa. Inodzorwa, hapana kusiiwa ”yakavharwa-loop manejimendi, yakataurwa zvakajeka" ina haifanire ", inoti:
Avo vasina chekuongorora nekuisa chega chitupa havabvumidzwe kutengeswa, avo vasina nucleic acid bvunzo mushumo havatenderwe kutengeswa, avo vasina chitupa chehutachiona havatenderwe kutengeswa, uye avo vasina kodhi yekutsva chikafu hachibvumirwe kutengeswa, zvichinyatso kudzikisira njodzi yekupararira kwechirwere chekunze kwekutenga chikafu chinotonhora.
Uye zvakare, Zhejiang inosimbisawo kudzivirira uye kudzora hutachiona hutsva hwekorona muzvinhu zvinounzwa kunze nevashandi vane hukama. Tichifunga nezvezvinoitika zvemumba, mune yakadzika tembiricha nharaunda munguva yechando, iyo nyowani coronavirus inogona kutenderera kuburikidza neisina-kutonhora cheni logistics masystem, ayo anoisa kumberi nyowani mitsva yebasa rekudzivirira panyama. Achifunga nezvekuenderera mberi nekuvandudza "sosi yekuongorora uye kutonga + yakaoma musimboti yekuzviparadzanisa + nemazvo akangwara kutonga" mashandiro, Zhejiang yakagadzira nhungamiro yekudzivirira uye kutonga kwezvinyorwa zvekupinda nevashandi vane hukama. Pakati pavo, zvinhu zvese zvinounzwa kunze kwenyika zvinotakurwa nendege dzenyika dzekutakura zvinhu kana kuburikidza nemachiteshi kuenda munyika, kunze kwezvimwe zvinhu zvakakura, zvinochenjerera uye zvinonzwisisika kutapukirwa noutachiona munzira yekufambisa uye kurongedzwa kwekunze kwezvigadzirwa; iyo yekunze nzvimbo yekutarisisa mukwende wevanopinda mukati inopfuurwa nendege yekuendesa bhanhire Pachokwadi, yunifomu disinfection inodiwa isati yatorwa. Basa rekuuraya utachiona rinoteera musimboti wekuchengetedza, kushanda, uye mashandiro akanaka, ayo asingangoderedze njodzi yehutachiona hutsva hwekorona hunotengeswa kunze kwenyika nezvinhu, asi zvakare inoderedza zvisina basa mashandiro uye mutengo.
Sekureva kwemunhu akakodzera anotarisira Hofisi yeProvince Inotungamira Boka reKudzivirira uye Kudzora, Zhejiang haina kana nyowani yemunharaunda yakasimbiswa nyaya dzenyaya kwemazuva 175 akateedzana; parizvino pane 4 dzakasimbiswa kesi dzakarapwa muchipatara, uye makumi maviri neshanu nyaya dzeasymptomatic hutachiona dzichiri pasi pekutariswa kwechiremba, vese vanobva mhiri kwemakungwa vanopinda.
Nekuda kwekuitika kwezviitiko zveapo neapo muManzhouli Guta reInner Mongolia Autonomous Dunhu, Zhalai Nuoer Dunhu reHulunbuir Guta, Pidu Dunhu uye Chenghua Dunhu reChengdu Guta reSichuan Province, zvinoenderana nezvinodiwa neZhejiang zvakajairwa chaizvo zvine hungwaru kudzora mashandiro, avo vari Classified as high-risk or medium-risk Avo vanouya kuZhejiang vodzokera kuZhejiang kubva mudunhu, kana vasingakwanise kupa isina kunaka nucleic acid test chitupa mukati memazuva manomwe vasati vasvika kwavanoenda, kana "hutano kodhi" girini kodhi ine iyo ruzivo, ivo vanozoendeswa kunzvimbo yakatarwa senge yenzvimbo yemuno yakazara sevhisi yenzvimbo yekuongorora nucleic acid; mhedzisiro yacho haina kunaka Iyo inogona kuyerera zvakasununguka uye zvakarongeka pasi pechirevo cheyakajairika tembiricha kuyerwa uye kuchengetedzwa kwega.
Uye zvakare, tichitarisa chokwadi chekuti denda iri muKashgar, Xinjiang yanga ichidzorwa, uye Zhejiang yakadzikiswa kusvika padanho rine njodzi munzvimbo yese, haichade vashandi vanobva Kalai neZhejiang vadzokere kuZhejiang kuzopa yakashata nucleic acid bvunzo chitupa. Kune avo vanodzokera kuZhejiang kubva kuDongjiang Port District yeTianjin City, Binhai New Area uye Shanghai Pudong New Area, izvo zvakadzikiswa kuita njodzi dzakadzika, isina kunaka nucleic acid bvunzo chitupa haichadiwi.
Kubva pakatanga denda iri, Zhejiang akateedzana akateedzera vatsva vekorona-vane hutachiona kubva mungarava dzepasi rese dzakagadziriswa muHong Kong. Kusimbaradza denda rekudzivirira mumunda uno chikamu chakakosha chekupindirana kwekunze. Zvichienderana nemamiriro chaiwo, nzvimbo dzakatarisana nemahombekombe dzakagadzira matanho epasi rose ekugadzirisa mabhizimusi ekuongorora maitiro, pamwe nekutsvagisa kwakazara uye kutonga pamusoro pechikepe trajectories, berthing ports, crew shifts, nezvimwe. Zvinoenderana nezvinodiwa ne "kuzere kuongorora, kuongorora kwekutanga, kuongorora kwekutanga, kuongorora kutanga, uye kugadzirisa kutanga", iyo nucleic acid bvunzo yevashandi yakafukidzwa zvizere pamberi pengarava yepasi rose inopinda mufekitori kuti igadziriswe; shanduko yevashandi haibvumirwe mhinduro dzekutanga dzisati dzapihwa, uye kugadzirisa hakubvumidzwe kushanda. Panguva imwecheteyo, makambani ekugadzirisa ngarava anodikanwa kuti aumbe yakazara yekunyoresa kunyoreswa uye yekuburitsa system, uye mabasa ekugadzirisa anogona kungoitwa mushure mekuuraya.